IBright Garden Bungalow kwindawo ethe cwaka. - I-Airbnb
IBright Garden Bungalow kwindawo ethe cwaka.
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguCorina
I-Sunshine, i-suite yegadi eqaqambileyo, esecaleni kwendawo yokungena kwi-Galapagos National Park kunye ne-Charles Darwin Station, kunye neebloko ezimbalwa ezikude nezinye zeevenkile zokutyela eziphambili, iigalari zobugcisa kunye neebhari edolophini. Ifumaneka ekupheleni kwesinye sezitrato eziphambili zasePuerto Ayora, kodwa isusiwe ngokwaneleyo ukuba ingangxolwa ingxolo yasedolophini.
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle linendawo yalo eluhlaza, kunye nendawo enkulu yokuhlala uze uphumle kuyo emva kosuku lokuzonwabisa.
Amanzi: amanzi acocekileyo yinto encinci kwiziqithi. I-Santa Cruz inemithombo yamanzi emininzi, ngokuqhelekileyo iba yintshatsheli yaye ayinako ukusela. Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle linamanzi amabini: elinye elingelilo elokusela kodwa elicociweyo kwaye lisetyenziselwa ukuhlamba, ukucoca nokupheka; kunye namanzi ayo anokusela acoceke kathathu (kuquka isihluzi se-carbon) aze aphinde asetyenziswe ngezihluzi ze-ultraviwagen.
4.92 · Izimvo eziyi-118
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle lihleli kwindawo ethe cwaka ecaleni kwe-Galapagos National Park nendawo yokungena Kwisikhululo Sophando esidumileyo sase-Charles Darwin. Iivenkile zokutyela eziliqela, iibhari kunye neegalari zikufutshane, kwaye indawo esedolophini ikumgama omfutshane wokuba ungahamba ngeenyawo, kwaye ulwandle lukwindawo ekufutshane. Abadobi basekuhlaleni wharf kunye nedolophu enkulu zingaphantsi kwemizuzu eyi-10 xa uhamba ngeenyawo.
Umnikazi uhlala kufutshane ibe usoloko efumaneka emini nasebusuku xa kukho iimeko zongxamiseko.